डा. सन्दुक रुइतलाई किन ‘भगवान’ मान्छन् हजारौं मानिसले? « Asia Sanchar : Nepal News Live
डा. सन्दुक रुइतलाई किन ‘भगवान’ मान्छन् हजारौं मानिसले?
२७ पुष २०७६, आईतवार २१:३४
काठमाडौं – प्रायः शरीरका कुनै पनि अंगमा समस्या आए, जटिल स्वास्थ्य समस्या भए, नेपाली नागरिक आफ्ना अस्पताल जाँदैनन्। आर्थिक रुपमा सम्पन्नहरु थाइल्याण्ड, सिंगापुर ताक्छन्। मध्यम् वर्गीय परिवारका नेपाली भारतको नयाँ दिल्लीदेखि भेल्लोर हुँदै बेङ्लोरसम्म पुग्छन्, स्वास्थ्य उपचार गराउनकै लागि।
तर, नेपालमा एउटा यस्तो चिकित्सा सेवा पनि छ, जुन सेवा लिन भारतका सबैजसो राज्यका सहित बंगलादेश, भूटान, चीनको तिब्बत, म्यानमार लगायतका मुलुकबाट बर्सेनि हजारौं मानिस आउने गर्छन्।
काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट विज्ञान विषय राखेर प्रविणता प्रमाणपत्र तह (आइएस्सी) पूरा गरे। आइएस्सी सकेपछि कोलम्बो प्लानअन्तरगतको छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढ्न भारत गए। ‘त्यसपछिको पढाई लखनऊस्थित किङ जर्ज मेडिकल कलेजबाट अघि बढ्यो,’ डा. रुइतले भने।
एमबिबिएस पास गरेपछि पनि उनी त्यहाँ अल्मलिएनन्। नेपाल फर्किए। र, वीर अस्पतालमा जनरल फिजिसियन’को जिम्मेवारीमा सेवा सुरु गरे। ‘त्यहाँ मेरो यात्रा केही वर्ष चल्यो,’ उनले भने।
तर, उनको पढाईको भोक मेटिएको थिएन। फेरि, भारत गए। अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्समा एमडी पढ्न सुरु गरे। सन् १९८० देखि सन् १९८४ सम्म एमडी गरेपछि उनी नेपाल आए। र, त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालमा सेवा सुरु गरेका हुन्।
अस्पताल स्थापनाकै लागि अष्ट्रेलियाको फ्रेड हलोज फाउण्डेशन, कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, साहित्यकार जगदीश घिमिरे, उद्यमी रवीन्द्र श्रेष्ठ, उद्योगी दिवाकर गोल्छा, सगरमाथा आरोही शम्भु तामाङ, डा. रीता गुरुङको साथ पाएपछि उनको अभियानले नयाँ उचाई लिन बेर लागेन।
‘एउटा आँखामा समस्या आइरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी जाँच गर्दा बालबालिकाको समस्या थाहा हुन्छ, र उपचार गर्न सहज हुन्छ, यो कार्य कक्षा एक वा नर्सरीमै हुनुपर्छ।’
खेतीपाती वा अरु कुनै काम गर्दा आँखामा धुलो पस्ने उल्लेख गर्दै रुइतले अन्य केही समस्या आए स्वास्थ्य केन्द्र जान सुझाव दिएका छन्।
सरकारले ती संघ–संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्ने, प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र हातेमालो गर्नु पर्ने उनले बताए। मोतिबिन्दुको शल्यक्रियालाई सरलीकरण गर्ने मूल्यमा कमी गर्ने र समुदायमा पुर्याउने योजना पनि रुइतले सुनाए।